Kiiskii Dhacdada Tareenka ee 'luorlu Tareenka' Dib loo dhigay Diisambar | RayHaber | raillynews
[18 / 02 / 2020] Taageeraha Samsunspor Tram Free	55 Samsun
[18 / 02 / 2020] Wadaagida Xeerarka Maxakamadda ee ka socda Ankara Metropolitan	06 Ankara
[18 / 02 / 2020] 25 9 Hawlaha Operating Qorshaysan in Start Logistics Center ee Turkey	06 Ankara
[18 / 02 / 2020] Xarunta Codsiga Kaarka Gaadiidka Bostanlı ayaa la furay	35 Izmir
[18 / 02 / 2020] Haydarpaşa Solidarity waxay ku jirtaa ficil horteeda Xarunta Tareenka ee 422 Todobaad	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Marmara59 CorluKiiska Tareenka ee Musiibada luorlu oo Dib Loo dhigay 10 Diseembar
Kiiska Tareenka ee Musiibada luorlu oo Dib Loo dhigay 10 Diseembar
12 / 09 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
kiiska tababbarka musiibada corlu dib loo dhigay baaxadda
Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 qof ayaa ku dhimatay halka 328 dad ahna ay ku dhaawacmeen tijaabada labaad ee shilka tareenka ee Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Publicorlu ayaa sii socota.
maalin maalmahaSida warku sheegayo Gökay Başca'nın; Agaasime Goboleedka CD TCDD 1 dhageysiga ayaa la qabtay shalay oo maanta ayaa lagu wadaa inuu sii socdo Halkalı Turgut Kurt wuxuu u shaqeeyey Maareeyaha Dayactirka Wadada Tareenka ee 14 Maareeyaha Dayactirka Jidadka Çerkezköy Özkan Polat, Madaxa Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka Madaxa Amniga Dayactirka Wadooyinka, Celaleddin Çabuk, oo ahaa sarkaalka dayactirka iyo dayactirka ee madaxa dayactirka wadada iyo Çetin Yıldırım, madaxa buundooyinka, ayaa difaacay.
Go'aanka laga gaadhay maxkamadda Turgut Kurt, Ozkan Polat, Cetin Yildirim codsigii qabashada, "eedaysanayaashu inay si joogto ah u raacaan dhegeysiga, ayaa lagu qiimeeyay baaxadda faylka oo dhan" waa la diiday.
Dhageysiga ayaa loo qorsheeyay inuu dib u bilaabmo berrito 09.00.
Sharaxaada qoysaska iyo dhaawaca ayaa bilaabmay
Bahattin Doğrul (Dhaawaca shilka): Waxaan doonayay inaan helo tigidh tareen ah. Waxay yiraahdeen ma gooyn karno tigidhada maxaa yeelay roob baa da'aya. Darawalku wuxuu yimi markaan tareenka fuulay laakiin ma gooyn tigidh. Markaa waa inaan bixiyaa lacagta Muratlı. Waxaan mooday inuu noqon doono dhibbane shil. Ma xasuusto wax intaas ka dib. Aniga ayaa hadda curyaantay. Caruurtayda iyo afadayduba way ila joogeen, mid ka mid ah carruurtaydii madaxiisa ayaa qarxay. Waxaa laygu daaweeyay isbitaalka gobolka, waxay dhaheen inaadan bixin doonin wax lacag ah, laakiin lacagtaydii ayey qaateen. Waxaan bixiyay 4000 TL. Waxaan ka cabanayaa dhamaan masuuliyiintaas. ”
Aysun Köse, oo ah hooyada Sena Köse: Haddii aysan taasi dhicin, waxaan tagi lahayn qolka maxkamadda. Toddobaadka ugu horreeya gudahood, dhakhtar ayaa u yimid sarkaal iyo sarkaal ka socda TCDD. Waxaan idhi waardiyayaashii waddada waa la eryay. Waxaan idhi ma bixin kartid mushaharkaaga. Sarkaalka TCDD wuxuu kaloo ii sheegay in aan loo baahnayn in shaqooyinkan la calaamadeeyo. Waxaan markaa baaray in annaga nalagu haayo bilowga 2020. Xagayada halkaas ma lahayn wax calaamad ah. Waa lay khiyaameeyay bilowgii. Waan qalday. AFAD waxay igu tidhi caruurtaada waxay ahaayeen tabular. AFAD si khaldan buu ii fahmay. Cisbitaalka ma geli karin. Waxaan ka dacwoonayaa waaxda caafimaadka. Cisbitaalka ma geli karin. Waxaan awoodnay in aan ka dhex baxno albaabka shaqaalaha. Waxaa laga yaabaa inaan wadno qabad ku dhici lahaa. Waxay dhaheen ma jiro dhimasho, dhaawacna ma jiro. Waxaan ka dacwoonayaa xarun walba. Tareenkan ayaa loo yareeyay laba saacadood. Waan aaminay. Taasi waa sababta aan u soo diray canuggayga wadadaas. Un Waxaad u egtahay qof kaa da 'yara, iler ayay ii sheegeen. Waxay u duuleen barafka. Waxaan aaminsanahay in tan loo qabtay showga. Waxaan rabaa in la i ciqaabo kuwa awoodda u leh inay saxeexaan.
Sena Köse aabihiis Gürkan Köse: Waxaan rabnaa inaan aamino wafdigaaga. Waxaan ka baranay shilka waxaan halkaas ku nimid saacad. Ma jirin gaadiid, waxaan halkaas ku helnay ciil. Waxaan gaarnay Isbitaalka Gobolka Çorlu. Waxay yiraahdeen qof walba waa nool yahay. Waxaan u soconnaa jaranjarooyinka, cidna hoos uma socoto, waxaan u soconnaa dabaqa hoose, iyagu waa dabaqa hoose. Tani waa wararka ugu been badan ee aad u adkaystay. Waxaan sugnay ilaa aroortii. Erayadii aan u sheegay xaaskeyga dhib ayaa ku dhacday. Waxay xaaskayga ku yiraahdeen, siniz adigu ka yar tahay. Waxaan ka cabanayaa qofkasta oo ka socda A ilaa Z.
Faahfaahin buuxda ka daawo Funda Maalin ka hor ehelkayagu wuxuu lahaa aroos, waxaan u aadnay Uzunköprü. Ma dooneynin inaan baxo maxaa yeelay safarku wuxuu qaatay waqti dheer maxaa yeelay waan ogaa inay qaadatay saacado kahor 3-4, laakiin carruurtu way ku adkeysteen. Baadhitaan aad u cajiib ah 'hooyaday hadda si dhakhso leh ayay u socotaa tababar' ayay yidhaahdeen. Maalintii xigtay ayaan tagnay oo helnay tigidhkeena, kuma uusan joogsan tuulooyinka, waxaan u maleynay inuu si dhakhso ah usocdo taas. Waxaan ka degnay saldhigga tareenka ee Sarılar. 'Gabadhaydu halkan kuma joogsanayso?' Waxaan weydiiyey Sidoo kale, wuu gaabiyey markii uu ka gudbay Muratlı. Laakiin dhinaca, tareenka wuxuu ahaa mid aad u dhakhso badan, waxaa jiray rakaab aad u fara badan, waxaa jiray rakaab badan oo taagan oo ma jirin rakaab 360 sinaba. Xitaa waxaan lahaa mid ka mid ah cagahayga mid ag fadhiya gabadhayda, oo waxay ku fadhiisteen farcanka. Bartamaha, waxaa jiray boodhadh, iyo ka dib boodhaddii, daaqadihii ayaa bilaabay inuu gariiro. Waxaan ahayn baabuurkii ugu horreeyay oo dhacay. Markii daaqaduhu bilaabeen inay gariiraan, Gabdhahaygu waxay jiifsadaan sariir badhkood anna waan dul seexday. Waxaan u maleyn jirnay inaysan faafineynin hadii daaqadaha burburaan. Daqiiqadaas waxaa dhacay qarax, kan ahaa kii iga soocay carruurtaydii. Waxaan suuxay. Markii aan u imid inaan fiiriyo labada dhinac ee gabadhayda ma helin. Markaas ayaan iska tuuray oo si xun bay u dhacday. Laba farsamoyaqaan ayaa yimid, 'faaruqa agagaarka tareenka ayaa laga yaabaa inuu dab qabsado' ayay yiraahdeen. Waxaan is idhi, 'Ilmahaygu waxay hoostagaan gaadhigaas' maxaa yeelay laba jeer kuma aan socon warankii gaariga. Daqiiqadaas waxay dhihi jireen waxaa jira dad gaariga hoostiisa mara. Markay xaaskeygu timid, waxaan u sheegay afadayda, inay dib ugu laabatay gaariga oo ay eegtay. Waxaan tagnay cusbitaalka Gobolka Tekirdağ oo leh qalabkeena. Warkii baa yimid, 'Gabdhihiina way wanaagsan yihiin'. Serum gacantayda ka soo baxday anna waan tagay. Waxa ay aheyd wax iska cad in dadka ka yar tahay baabuur ah, waxaan heysanaa kooxda samatabbixinta ee Jamhuuriyadda Turkey ah, ma laha kooxda deg-deg ah? Waxaan doonayaa in aan dacweyn Jamhuuriyadda Turkey, sidee baannu u noolaan, waxaan ku nool nahay dun cudbi ah? Waxaan u wada shaqeeyaa shirkad gaar ah waxaanan helaa tababaro laba jeer sanadkii si aan u ilaaliyo caafimaadka macaamiisha xaalad degdeg ah. Waxaan la yaabanahay in shaqaalaha ka shaqeeya gobolkaan ay u qalmeen bilowgii ilaa dhammaadka ama subaxnimadii ama salaanta ayey yimaadeen. Miyayna muhiim u ahayn nolosha dadkaan? Waxaan siiyey laba ka mid ah carruurteyda. Waxaan doonayaa inaan dhammaystirto. Waxaan sidoo kale ka cabanayaa cid kasta oo mas'uul ka ah.
Ahmet Can: Waan lumiyay wiilkayga 5-sano jir ah sababtoo ah dayacaad ee gaadiidka adduunka ee lagu kalsoonaan karo. Intii aan silcinay, xaflad madaxweynenimo ayaa loo qabtaa sidii inaysan waxba dalka ka dhicin maalinta ka dambeysa shilka. Nolosheenna waa laga gudbey, laakiin wax farqi ah ugama keento iyaga. Gobolkani nama sheeganayo. Waxaan ka dacwoonayaa cidda mas'uul ka ah. Waxaan haystaa wiil kale, mana doonayo inaan isaga ku dhinto dhacdo la mid ah mustaqbalka.
Melike Can, oo ay wiilkeeda hal-sano jir ah ku lumisay xNUMX sano tareenka: 2 nama caawin saacado. Waxaan ka soo baxay tareenka aniga oo wata halgankayga. Gobolku ma laha helikabtar.
Erkan Duman, oo waayey xaaskiisa oo uu ku dhaawacay xaaskiisa intii uu socday xasuuqa: Waxaan ku akhriyey bayaanka makaanikada. Ugu horreyntii, wuxuu ugu yeeray kan sare halkii ambalaas. Ahmiyadaha ayaa leh. Maadaama aanan ahayn shaqaale TCDD, ujeedkeygu waa inaan dadka badbaadiyo. Naagtaydii ayaan ugu yeedhay gaadhiga warwareega. Waan nool nahay. Cilmi nafsiga wiilkeygu wuu jabay. Isagu ma geli karo diyaarad ama bas. Wiilkeyga waa lumi lahaa haddaanan ka mid ahayn kuwa ugu horreeya ee halkaas taga.
Emre Kocaağa: 'Sidee tahay, xaggee joog tahay sidee tahay Ma jiro qof na soo waca oo na weydiya. Laakiin haddii ay keenaan qofka '4' oo ay noo soo bandhigaan, waxaan rabnaa qofka kor ku xusan, markaa way imaan karaan oo halkan way istaagi karaan. Waxaan ku shaqeeyey keligeyga, Waxaan ku leeyahay xiniinyaha '3 platinum' laf-dhabarkaaga oo wali waxaan ku jiraa daweyn. Waxaan ku jiray tareenka iyo tareenka dadku aad ayuu u badnaa. Saldhigga kuma jirin saraakiil tikidhada iibsata, mana jirin cid tareenka ka goysay. Waxay yiraahdaan ma joojin karno maxaa yeelay waxaa jira koronto la'aan laakiin koronto ma jirin. Xitaa waxaa jiray dad fadhiyey tareenka. Markii aan nidhaahno dambiile ma ay ahayn, way nagu qaylinayeen oo ay gafeen.
Fatmaahin, oo tareenka la raacda wiilkeeda iyo gabadheeda oo wiilkeedii lumay: Wiilkeygu wuxuu ku hoos dhacay tareenkaas weyn. Wax walba waan kaga tagey halkaas. Indhahayga waan xidhaa waxaanan arkaa wiilkayga
Erkan Duman, oo waayey xaaskiisa oo uu ku dhaawacay xaaskiisa intii uu socday xasuuqa: Waxaan joogay Corlu Station markii uu tareenka dhacay. Waxaan raacay baabuurkeyga dab-damiska iyo ambalaasta, laakiin way kari waayeen goobta. Wiilkeygu wuxuu fadhiyey dhinaca wadada sidaa darteed waan orday. Daqiiqadaas ma jirin booliis, gendarmerie. Waxaan u sheegay wiilkeyga halka hooyadi joogtay, hooyaday waa dhimatay, aabe. Waxaan idhi waxaan heli doonaa hooyadaa. Gaarigaan galay, laga yaabee in aan badbaadiyo qof haddii aanan badbaadin. Waxaan furay bacaha jirka mid mid si aan u ogaado bal inaan xaas qabo. Way i soo waceen waxayna yiraahdeen naagtaada qaliin baa ku jira, laakiin xaaskeygu way dhimatay, waxaan u maleynayaa inay si ula kac ah ku sameeyeen. Sababta oo ah waxay rabeen inay nadiifiyaan wadada sida ugu dhakhsaha badan, iyagoo bixinaya lacagta sugitaanka ee gaadhiga kale. Waxaan u malaynayaa, iyaga sida ay qabaan, khidmadani inay ka qiimo badan tahay nolosheena. Diyaarado helikobtar ah ma aysan qaadin wax dhaawac ah, waxay qaadeen meydadka. Waxqabadka hore wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah, laakiin dadku waxay ku dhinteen nolol dhimasho. Annagu ma nihin tareenka waddooyinka ama tcdd, laakiin waan naqaannaa cidda dambiile tahay.
Kemal Kurtuluş oo carruurtiisii ​​iyo naagtiisii ​​lumay: Waxaan u tegey daryeelaha saldhiga waxaan weyddiiyey halka tareenka laga tuuray waxaanan idhi ma haysto macluumaad. Waxaan tagay goobta, laakiin ilmo ma jirin. Ka dib waxaan u aadnay marinka maydka, waan kari waayey, sideen u samayn karaa? 6 bil kasta ayey ahayd. Anigu ma aqbalayo dacwad ku qaadista qofka 4 iyo ka saarida TCDD. Waxaan sidoo kale ka cabanayaa TCDD.
Zehra Bilgin, oo waayey gabadheeda, adeerkeed, iyo walaalaheed: Waxaan lumiyey wiilkayga ifaya, walaalahay, ilma adeerkey 5 bil kasta sababtoo ah dayacaad qof awgeed. Caruurtu waxay aqriyeen sheekooyinka tareenka ee tareenka, kaasoo ahaa riyo casaan ah oo boodh ah. Had iyo jeer waxay arkeen iyada oo ag maraya, ayay rabeen. Waxaan u tagnay halkaas si dhinac kasta uu u dhinto dhinaceeda, dhinac kasta wuxuu ka buuxay iscasilasho. Sidee ayay u tahay in da'dan casriga ah ee teknoolojiyada, ay eegaan cimilada telefishanka oo ay baxaan marka xigta? 6 Waxaan helayaa kun rodol, 5 Waxaan helayaa kun rodol oo ay u sheegaan inay mudan yihiin lacagta ay helaan? Waan aasay ilmahayga, waxaan aasey walaalahay. Qoyska 25 wuxuu aaday 25 wuu tagi karaa. Waxaan rabaa in aan arko makaanikada halkan. Weligey ma aqbalayo warbixinta khabiirka, eedeymaha ku lug leh dadka xiriirka ganacsi leh. Haddii Çorlu la qaado cabirka kadib, Ankara ma jiri doonto. Illaa neefsashadaydii ugu dambeysay, ilaa dhibicda ugu dambeysa ee dhiigga aan ka cabato. '
Huseyin Sahin: Daqiiqadii ugu horreysay ee aan u imaado goobta waxaan taabtay gacanta canuggayga, way kululayd. Shaqaalaha gargaarka degdegga ee ambalaasta ayaa raadinaya dhaawac aad u culus. Waxaan isku dayayaa inaan fuulo oo aan gacmahayga ka qodo oo gacmahayga, saraakiishii halkaa joogtay waxay isku dayayaan inay naga riixaan. Iyagu way taagan yihiin iyagoo na daawanaya. Waxaan aadaa qabriga wiilkayga, qoortaydu way foororsatay, madaxayga kor uma qaadi karto. Waa maxay sababta? Looma keenin cadaalad.
Cihan Subaşı: Madaxayga ayaa ku qarxay shilka, 40 madaxayga ayuu ku dhejiyay. Gacanta bidix, anqawgayga waa go'ay, lafahayga dhabarkuna way jabtay, qoortaydu way jabtay, feedhkaygiina way jabtay, sambabbadaydii waa la bakhtiiyay. Waan kici kari waayey, albaabku aniga ayaa saaran. Oo anigu waxaan dhinac kaga qoday dhoobo, oo waxaan u qoday sidii suul oo kale. Qof baa i qabtay. Waxaan sugayay gargaarka degdegga ah ee 1,5 inuu yimaado.
Ismaaciil Kartal oo waalidkiis ku waayey xasuuqaas: Walaashay waxay i soo gaadhay qiyaastii 6. Saacadda ku taal goobta Sarıld waxay ahayd qiyaastii 7. Waxaan tagnay aagga uu shilku ka socdey salka hoose ee Sarılad in wadada la gooyay oo tareenka uusan sii gali karin. Hooyaday iyo aabbahay waxay ku safreen tareenka. Muddadii aan imid goobta shilku ka dhacay, waxaan halkaas ku arkay dhacdo naxdin leh. Waxaa jiray cilad ku jirtay magaca shaqada badbaadinta. Waxaan doonayay inaan caawiyo sababtoo ah waxaan helay tababar gargaarka degdegga ah, laakiin kooxuhu waxay isku dayeen inay naga fogeeyaan garoonka intii suurta gal ah. Shaqada soo kabashada si sax ah looma qaban. Hawlo badan ayaa lagu fuliyay magaca dukumiinti saxeexan sida xaruntu looga saaray. Maareeyaha guud ee TCDD ee Wasaaradda Arimaha Gudaha İsa Apaydın sida aan loogu qaban karin mas'uuliyadda masiibadaas. Waxaan joogay goobta shilku ka dhacay ilaa 11 saqbadhkii, oo waxaan arkay bamka taangiga oo imanaya. 25 wuxuu siiyay nolosha aadanaha.
Mısra Öz Sel: Waxaan soo barbaariyay wiilkeyga 9-sano jir ka hor intuuna qashinqabin. Waxaan ka soo laabanay fasaxii maalintii shilku dhacay. Markuu tareenka fuulay si uu ula tago aabihiis Uzunköprü, wiilkeygu wuxuu iigu yeeray wicitaan fiidiyow ah oo sawirro ka soo tuuray gudaha tareenka. Wuxuu ii sheegay inuu imanayo, laakiin ilmahaygu wuu kari waayey. Waa maxay sababta? Dayaca awgeed. Intii aan lahadlayay fiidiyowga, waxaan ogaadey in cunugeyga oo had iyo jeer xirto suun, uusan laheyn suumanka kursiga suunka. Waxaan aaday xarunta tareenka si aan u soo qaado, markii aan imid goobta ay ahayd 8. Ma geli karin goobta ay ahayd inaan aado Isbitaalka Gobolka Corlu. Maalintii shilku dhacay, booliska iyo gendarmes-ka ma aysan gudbin qof kasta oo xiray wadada. Waxaan doonayay inaan aado goobta, anigoo ka codsanaya ilmaheyga inuu joogo. Waxaan u maleynayaa inaan fuushay gaari biyo qaada, oo u ballan qaadaya koofiyad rayid ah inay biyo qaadaan. Waa aniga aniga. Wadada, laba sarkaal ayaa wada hadlayey: Waxaan ku wadnaa baabuurkan, laakiin gaadhigan meeshaas ma galaan ee gaadhigan galaaya waa slime. Waxay dhaheen waxaan u baahan nahay ogolaansho. Miyay tahay inaan helo rukhsad wakhti sidan oo kale ah? Maaddaama gaadhigu aanu tegi karin tareenka, waxay ahayd inaan dego meel cayiman ka dib. Markii aan ka soo degay gaadhiga, waxaa layla wejigay ereyada, k Kumaad biyo u soo siiseen, qof halkaas ku nool ma jiraan? Ugu dambeyntii waxaan fuushay cagaf cagaf oo waxaan tegey meeshii: markii aan halkaas gaadhay, waxay ahayd 20.30. Goobtu waxay ahayd jahwareer. Waxaan sidoo kale arkay kooxaha ku quudiyay calooshooda sanduuqyada Pizza gacmahooda. Waxaan aaday gendarmerie “Ilmahaygu wuu dhintay. Cisbitaal kasta magac ma jiro mana sheegin illaa sabtiga subaxa. Iima sheegin goobta, laakiin aabbahay Mehmet Öz wuxuu arkay wuxuu ilmahaygu sameynayo. Habeenkaas markii ay siiyeen lambarka aqoonsiga qofka iyo magaca iyo magaca, waxay u sheegeen cusbitaalka uu ku yaal. Waxaan imid Isbitaalka Gobolka Çorlu waxayna ku jirtay xaalad jahwareer. 23 habeenkii: Waxaan maqlay inaan wiilkeyga lumiyey sida 30. Habeenkaas, dhammaan xeer-ilaaliyeyaasha isbitaalka ehelka marxuumka, in kasta oo ay arkeen dhammaan kiisaska marxuumka, waxaan la yaabanahay sida ay khubaradu u magacaabeen faylkaas. Marka hore waxaan ka dacwoonayaa labadan aqoonyahan. Dhacdooyinkaas kadib, markii la diyaarinayay sheegashada, suurta gal ma tahay in la akhriyo aqoonsiga aaska? Ilmahaygu wuxuu ku qaatay bacaha loo kala saaray ABC. Weligiis ma cabasho? Uma umulinin inan ilmahayga lumiyo. Xafiisyada sare ee muddada, Agaasinka Guud ee TCDD iyo dhammaan shaqaalaha TCDD way cabanayaan anigu ma aqbalayo eedeynta.
Nuriye Violin, oo shilka ku dhaawacmay ninkeeda: 'Dhabarkaygu way jajaban yihiin, platinum-ka' 8 'ayaa aniga igu dheggan. Waxaan haystay dhibaatooyin nafsaani iyo jir ahaaneed. Waligeey maan arag makaanike caawinaya. Maamulka ayaa sidoo kale soo daahay. Dhamaan kuwa masuulka ka ah waa in la ciqaabaa
Semiha Subaşı, oo ku dhaawacmay wiilkiisa Cihan Subaşı: Sonrası Isla markiiba dhacdada, waxaan wacay 112. Waxay ii sheegeen inay direen koox laakiin ma iman karin wadada awgood. Waxaan idhi, ‘Wixii aysan imaan karin, waxay doorteen inay hawshan qabtaan. Dadku way dhimanayaan
Saliha Erbil: ÇerkezköyWaxaan ku noolaan jirnay hoyga. Waxaa jiray mitir '10 mitir' oo ka yimid goobta shaqada ilaa guriga. Waxaan leenahay labo caruur ah, 9 iyo 6. Waxaan weydiiyay sababta aysan jirin wax qoritaan ah iyo sababta ay markasta sidan u tahay. Xaaskeygu waxay ii sheegtay in Tareenka Gobolka uusan shaqaaleynin shaqaale. Wuxuu ka tagey carruurtii tuulada wuxuuna igu yiri "waan socdaa". ÇerkezköyWuxuu sheegay inuu halkaan joogi doono toban daqiiqo. Xaaskeygu waxay ka shaqeyn jirtay ilaaliyaha amniga waddooyinka tareenka ee gobolka. Waligiis saxeexin wixii uusan arkin. Qof walba wuxuu igu dhahay inaanan dambi lahayn. Kumaa dambiile ah? Xaaskeyga? Saqdii dhexe saqdii dhexe ayay xaaskeyga ku rideen bac madow oo ay saareen helikobtarka. Xaaskeyga ayaa aaminay giraanta aniga. Dhiigiisa waxaan u dhiibay agoonta. Waxaan doonayaa cadaalad carruurtayda. Waxaan rabaa inaan ku rumaysto mar labaad. Qoraal been ah oo been abuur ah ayaa la bixiyay. Waxba lama qaban sanad. Xaaskeygu waxay u dhimatay dayacaad. Waxaan weydiinayaa shaqaalaha aan shaqadooda u gudan si sax ah berri, maalinta ku xigta, sideed u eegi doontaa wejiga xaaskayga? Xaaskeygu ma ahan mid lacagta kaqaata, waxay shaqadeeda aad u jeclaa. Gawaarida ayaa had iyo jeer noqoneysa oo dadka wanaagsan ayaa luminaya. Fadlan ha lumin dadka wanaagsan waqtigaan. Ha dulmin dadka doonaya caddaaladda.
Ku dhaawacmay musiibada Zahit Açan: Waxay iga soo waceen TCDD shilka kadib. Waxay waydiiyeen inay ka caban doonaan haa markay telefoonka si toos ah wejigayga u xidhaan
Awooda albaabada qolka maxkamada waxaa goynay amar maxkamadeed oo leh 'fiilooyin ayaa furan, waa laga yaabaa inay garaacaan'
Esra waxaa ku waayey hooyadeed iyo aabeheed: Markiiba shilku dhacay, xafladii Madaxweynaha ayaa la qabtay, oo aad u xanuun badan. Waxaa jirtay dabbaaldeg markii baroor-diiq loo baahnaa.
Nükhet Karasu oo hooyadeed ku weyday musiibada:Qareenka TCDD wuu na caayay, waan ka dacwoonayaa. Hooyaday waxay iigu yeedhay tareenka waxayna igu tidhi gaajaysan. Hooyaday way gaajooday. Haddii hooyaday ay gaajo ku hayso qabrigaas, kuwa mas'uulka ka ah. Ma doonayo cadaalad hoosta xarkaha.
TCDD WAA U BILAASHAY KA QAYBGALKA
Kadib hadaladii qoysaska, qareenada ayaa dabaqa qaatay.
TCDD ma aysan baafin wax sarkaal ah oo sarsare, oo codsaday in laga qeyb qaato kiiska. Codsiga TCDD wuxuu ka yimid dhibanaha iyo qareennada cabanaya. Dhibbanayaasha iyo qareennada cabashooyinka, "faylkan, codsi kasta oo hay'ad ku saabsan jihadaan lama aqbali karo ayuu yiri karatmaması," ayuu yidhi.
Isaga oo ka hadlaya warbixinta khubarada, qareenada waxay cadeeyeen in kuwa lasiiyay hindisada dambiilayaasha markii dambe loo magacaabay khubaro, waxayna yiraahdeen, kim yaa siiyay xeer ilaaliyaha magacyada khabiirada? Faylkaan, dadka ay tahay in lagu maxkamadeeyo sidii tuhmanayaal waxaa loo magacaabay khubaro ”.
'MA GARAN KAR KARIN KHATARTA, MA FAHAN KARI KARO MURDER'
Hayrettin Çetin, oo ah mid ka mid ah qareenada dacwoodayaasha ayaa ku dooday in dhacdada aysan aheyn "shil, laakiin ay tahay dilida cinayet iyadoo ay macquul tahay".
Çetin wuxuu yidhi, sonrası Ka dib hadalada eedaysanayaasha iyo dayacaadda muuqata, si lama filaan ah uma nihin; waxaan ugu yeernay dil ula kac macquul ah
Ç Waxaan cadeyneynaa in howsha dhageysiga aysan ku sii socon karin warbixinnadan iyo eedeysanayaasha. Waxaan dalbanaynaa magacaabista guddi khubaro cusub iyo in la maxkamadeeyo dhammaan kuwa mas'uulka ka ah. "
Qareen Duygu Arslan, oo ku tilmaamay warbixinta TMOOB faylka, wuxuu yiri “ka saarista saxiixa injineerka dhismaha wuxuu ogolaanayaa wadada runtii dhamaan dhacdooyinkaan.
INTERRUPption WAA CAAWIN
Ugu dambeyntiina, eedeysanayaasha ayaa loo ballan qaaday. Eedeysanayaasha ayaa sheegay inaysan aqbalin dambiyada lagu soo eedeeyay.
Dhageysiga dacwada ayaa la joojiyay saacad iyo badh.
Go'aanka caalamiga ah
Maxkamaddu waxay siisay go'aanka ku meel gaarka ah ka dib nasashada.
Go'aanka ku-meelgaarka ah ee lagu weydiinayo qorshaha waxqabadka TCDD'ye, sameynta guddi khubaro ah oo ku saabsan codsiyada mar labaad, diidmada codsiga TCDD ee ka qeybqaadashada maxkamadda ayaa la go'aamiyay.
10 waa taariikhda dhageysiga xigga Range set
Dhageysiga koowaad ee kiiska lagu qabtay Conferenceorlu Court of Justice Hall Hall ee Luulyo 3, qoysaska badbaadayaasha looma oggolaan hoolka iyada oo lagu saleynayo in aysan jirin qol isla markaana qoysaska la garaacay. Qareennada, kuwaas oo amar ku bixiyay inqilaabka si loo go'aamiyo cidda sameeyey dareenka dembiga. Qareenka maxkamada ayaa sidoo kale taageeray go'aanka ah in la xareeyo cabasho dambi waxaana uu waydiistay maxkamada in ay go aansato cidda amartay. Markay ahayd dacwadda dambiga iyo codsiga, wakiilka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay inay ka baxday kiiska oo ay u dirtay feylkii maxkamadda ciqaabta culus ee 2. Maxakamada Cadaaladda ee 2 ayaa diiday go’aanka wefdiga ee ka laabashada kiiska.
Xaaladda Musiibada ee Tareenka Çorlu, Maanta 600 Hall Personality Hall
Muuqaal naxdin leh oo ku saabsan Musiibada Musiibada Corlu
Saxafi Mustafa Hoş Baadhitaan Musiibada tareenka Çorlu
Dhageysiga 3 ee Musiibada Musiibada ee Çorlu
Kiiska shilka tareenka Çorlu ee dib loo dhigay 21 April
Musiibo Musiibo ee Chorlu: 360 Ticket loo iibiyo 563 Train
Gudoomiye Ku Xigeenka Kooxda CHP Chorlu Tababarka Musiibada
Warbixinta Mashruuca Masiibada Tacliinta ee Chorlu Tren MO
Mısra Öz, oo wiilkeeda ku weyday Musiibadii Tareenka ee 'luorlu:' Kuwa mas'uul ka ah Axad walba oo ku beegan 12 Asbuuc…
Iskudbinta jahawareerka khibrada tacliinta Musiibada ee kuyaala Corlu
Wasiirka Culvert oo ka hadlayey Musiibada Tababar ee Qorlu
Koorlu Tababaridda Musiibada Saacadaha 2aad ee Kameradda
Aamusnaanta kaddib marka lagu daro Musiibada Musiibada
25 Km Xawaa Kadib 25 Qofka Dhimashada Kusoo Dhimashada Musiibada
Dhibaatada Mustaqbalka ee Guruubka Culus
Si toos ah ula xiriir Özkan
View Proetin Xogtiisa oo dhameystiran
Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Corlu
Xaaladda Musiibada Tareenka Çorlu
Shil tareen oo isku dhejiya
Si toos ah ula xiriir Celaleddin
Xeerka TÜDEMSAŞ ee Qiimaynta iyo Iibsiga Hantida Alaabada
25 9 Hawlaha Operating Qorshaysan in Start Logistics Center ee Turkey
Xarunta Codsiga Kaarka Gaadiidka Bostanlı ayaa la furay
Isku-dhafka la-isku-qurxiyo ee Karakoyunlu Bridge Isdhaafsiga iyo Viaduct
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha waxaa lagu ku faafaa Ordu
184 Dad ayaa Codsadey Iibsiga 744 Darawalada Baska ee Degmooyinka Magaaladda Mersin
635 kun TL Ciqaabta Markabka Doonta Ku Burburinaya Gacanka Izmit
Haydarpaşa Solidarity waxay ku jirtaa ficil horteeda Xarunta Tareenka ee 422 Todobaad
Mar kale Temsa waa la iibiyay! Marka yaa iibsanaya?
İntek Kalıp ve İskele Wuxuu Noqday Wada-shaqeeyaha Xalka ee Mashruuca Tareenka ee Tansaaniya
Shirkadda CRCC oo Sameynaysa Nidaamka Tareenka Xawaaraha Sare ee Ingiriiska